नेपालगन्ज : सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लिले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंलाई मध्यनजर गर्दै मात्र रु. ९९ मा इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।
आउदै गरेको महान चाडलाई उपभोक्ताहरुले हर्षोउल्हासका साथ मनाउनका साथै इन्टरनेटको माध्यम बाट सर्भशुलभ मूल्यमा एकआपसमा खुसी साट्न पाउन भन्ने उद्देश्यले न्युनतम मूल्यमा यो सेवा बजारमा ल्याएको हो ।
यस प्याकेज अन्तर्गत ग्रहाकहरुले मात्र रु. ९९ (कर सहित) मा एक महिनाको लागि 30 Mbps इन्टरनेट सेवा अथवा सोहि मूल्यमा क्लियर टिभि प्रिमियम प्याकेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जसमा ७५ भन्दा बढी एच. डी च्यनलहरु सहित २७५ भन्दा बढी डिजिटल च्यनलहरु रहेका छन् ।
सथै मात्र रु. १९८ (कर सहित) मा ग्रहाकहरुले इन्टरनेट र क्लियर टिभि कम्बो प्याकेज सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जसमा 25 Mbps इन्टरनेट र क्लियर टिभि प्रिमियम प्याकेज रहनेछ ।
यी सेवाहरु सीमित अवधिका लागि मात्र रहनेछन् , साथै सर्त तथा नियमहरु लागू हुनेछन् ।
सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लि.ले केबल तथा डिजिटल टिभी सेवा, कन्जुमर इन्टरनेट, इन्टरप्राइज इन्टरनेट, एम.पि.एल.एस भि.पि.एन.एस (MPLS VPNs), व्यानएथर्नेट(WAN Ethernet), होलसेल आइ.पि ट्रान्जिट(Wholesale IP Transit),डाटा सेन्टर सोलुसन(Data Center Solution) जस्ता मनोरञ्जनात्मक सेवातथाबिजनेस सोलुसन नेपालमा प्रदान गर्दै आएको छ ।
Clear TVबारेमा ः
Clear TV, सुबिसु केबलनेट प्रा. लि., नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटर्वक सेवाप्रदायक कम्पनीको उत्पादन हो । यो नेपालको पहिलो Digital Cable Television सेवा हो जसले MPEG4 Standard Definition र High Definition channels केबल मार्फत, Conditional Access System(CAS) को प्रयोग गरि Set Top Box को माध्यमबाट प्रसारण गर्दछ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ २९, २०७६, ०८:०९:००
नेपालगन्जमा चर्जिङ स्टेसन स्थापनाको योजना
नेपालगन्जमा विज्ञान तथा प्रबिधिको बृहत प्रर्दशनी एवं महोत्सवको आयोजना हुने भएकोछ । आगामी फाल्गुन ८ देखि १० गते सम्म कारकाँदो स्थित सडक डिभिजनको परिसरमा उक्त प्रर्दशनी तथा महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ ले भुटान, बङ्गलादेशको ढाका तथा भारतका आसाम, दार्जि्लिङ र सिक्किमका भूभागको तस्बिर लिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्